Fasan-karana : tafaporitsaka ilay nitondra vola 30 tap Ar, | NewsMada
Fasan-karana : tafaporitsaka ilay nitondra vola 30 tap Ar,
Par Taratra sur 06/08/2020
Tranga manjavozavo. Tafaporitsaka niaraka amin’ny moto nentiny ny lehilahy iray nanao fanamiana polisy nitondra vola 36 tapitrisa Ar. Voatifitry ny polisy nanenjika azy kosa ny iray namany, nitondra moto ary maty rehefa tonga teny amin’ny hopitaly.
Nanomboka, omaly tamin’ny 5 ora maraina ny zava-nitranga. Voalaza fa nisy mpitandro filaminana roa manao fanamiana polisy manao fanaraha-maso (PR) ny fiara. Misava ny antontan-taratasy tahaka ny fanao izy ireo. Nahita kitapo feno vola hatrany amin’ny 36 tapitrisa Ar izy ireo rehefa nisava fiara iray. Nalain’izy ireo izany vola izany ary nitsoaka tamin’ny moto scooter nihazo ny lalana Fasan-karana izy roalahy. Niantso polisy ilay tompom-bola ka raikitra ny fifanenjahana, araka ny loharanom-baovao. Namoaka basy izy ireo ka voatery nitifitra ny polisy. Voa ilay iray nitondra moto tao aoriana. Tafaporitsaka kosa ilay iray niaraka amin’ny vola.
Nosavaina ilay moto nentin’ilay iray tavela voatifitra. Hita tamin’izany ny karatra maha zandary azy sy ny toeram-piasany etsy amin’ny Toby Ratsimandrava, niaraka amin’ny taratasy samihafa, toy ny an’ny banky.
Nandray an-tanana ny raharaha ny polisin’ny BC, etsy Anosy. Andrasana ny ho tohiny.